Ny Trailer 'Tsy misy endrika' dia maneso traikefa mampihoron-koditra mahery vaika - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ny Trailer 'Tsy misy endrika' dia maneso traikefa mampihoron-koditra amin'ny vatana
Ny Trailer 'Tsy misy endrika' dia maneso traikefa mampihoron-koditra amin'ny vatana
by Trey Hilburn III Janoary 13, 2022 4,569 hevitra
Mila horohoro vatana bebe kokoa izao tontolo izao. Ny hevitra ny amin'ny vatanao hanohitra anao ary ho lasa biby goavam-be amin'ny tantaranao manokana dia mangatsiaka. Ny tranofiara ho an'ny tsy misy endrika dia manome antsika fiaraha-mientanentana tokoa amin'ny sub-genre body horor. Ity iray ity dia mamadika ny fikorontanan'ny sakafo ho lasa demonia mivantana.
Ny fikorontanan'ny sakafo dia ny biby goavam-beny manokana ary mijery ny mpamokatra sarimihetsika mitantana izany lohahevitra izany amin'ny alàlan'ny famadihana zavatra mahafaty ho fototry ny tsy misy endrika dia fihetsika mamirapiratra ho azy. Ny sarimihetsika dia toa tena vita tsara. Fampisehoana tsy mampino ho an'ny lahatsoratry ny tale Samantha Aldana.
Ny synopsis ho an'ny tsy misy endrika mandeha toy izao:
Ivy, mpihira sahirana any Nouvelle-Orléans voafandrika ao anatin'ny tontolon'ny fikorontanan'ny fihinanana azy, dia tsy maintsy miatrika ny fiankinan-dohany - na mety ho lasa biby goavam-be.
tsy misy endrika kintan'i Kelly Murtagh, Bobby Gilchrist, Jamie Neumann, Marco Dapper, Erika Ashley, Gralen Bryant Banks, ary Zardis Nichol.
Ny XYZ Film tsy misy endrika tonga manomboka ny 10 febroary.